कर्मचारीको भुँडी र मदिराको नक्कली बिल | Image Channel Blog | ImageKhabar.com
होमपेज / ब्लग / कर्मचारीको भुँडी र मदिराको नक्कली बिल
कर्मचारीको भुँडी र मदिराको नक्कली बिल Published: April 5, 2015 | आईतवार 22 चैत, 2071 | 5:30 AM | By Krishna Neupane | Viewed: 2161 times
-कृष्ण न्यौपाने ।
पुटुक्क परेका गाला, टुच्च उठेको भुँडीवाला राष्ट्रसेवक कर्मचारी मदिरामा पनि नक्कली बिल पेस गरि अकुत सम्पत्ति थुपार्नमा तल्निन बनेको देख्दा अचम्म लाग्छ । तर अचम्म मानेर पनि के गर्नु बिजुली पानीमा पनि यस्तो राजनिती ? हाम्रा देशका सरकारी कर्मचारी कति बाठा छन । धनसम्पती थुपार्न यिनीहरुको जस्तो ‘आइडिया’ सायदै कसैको होला ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘राता गाला’धारी, टुच्च उठेको भुँडी भएका नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वकामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौला र दुई बहालवाला सचिव सहित २३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । उनीहरुबाट ८१ करोड ६५ लाख बिगो मागदावी समेत गरिएको छ । ३३ करोड ७२ लाख बिगो मागदाबीमा परेका निरौँला करिब एक करोड रुपैैँयाको कारोबारबाहेक बोर्डमा भएका सबै भ्रष्टाचार मुद्धामा समेत फसेका छन् ।
एउटा चाख लाग्दो कुरा के छ भने भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुले २४ लाख रुपैयाँको मदिराको समेत झूटो बिल पेस गरेका छन् । हुन त मदिरा सेवन नगर्ने मानिस पाउन कठिननै छ । बहालवाला मन्त्रीदेखि केहि कर्मचारी समेत मदिरा काण्डमा फसेका उदाहरण छन् । मदिराको चर्चा जतिनै गरेपनि अपुग हुन्छ । परापूर्वक कालदेखि राजा महाराजाहरु, मन्त्रीगण र कर्मचारी गण सबैले यसलाई सोमरसको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।
भनिन्छ मदिरा सेवन गर्ने मानिस निडर र आँटिला हुनुको अलावा मोटोघाटो र भुँडी लागेको हुन्छ । धेरैजसो भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरु भुँडीवाला र मोटोघाटो हुनुले के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने हाम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु मदिरा धेरै मन पराउँछन । कतै यि ठूलाठूला भुँडीमा सोमरसको अलावा अरु चिज पनि सन्चित छ कि ? चिया दोकानमा कहिलेकांही बुढापाकाको रमाइलो कुरा सुन्न पाइन्छ । ‘हाम्रा कर्मचारी कति जाँड खान्छन यार, कार्यालयमा जाँदा पनि मदिराको बास्ना आउँछ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बढ्दो भुँडीले सबैतिर संका र उपसंका पैदा हुनु सामान्य कुरा हो किनभने भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरुको भुँडी पनि ठूलै हुने गरेको छ । हुन त एकताका नेपाल प्रहरीले भुँडी घटाउ अभियाननै संचालन गरेको थियो । तर अचेल भुँडी घटाउ अभियानको चर्चा त्यति सुन्न पाइदैन । सडकमा उच्च कर्मचारीको भुँडीको दृश्यले नेपालीलाई उत्सुक बनाएकै छ ।
सुनिन्छ अख्तियार भित्रैपनि केहि कर्मचारीको भुँडी बाक्लै छ । भुँडी बढाउने अभियान थाल्दाथाल्दै केहि पटक अख्तियारकै कर्मचारी पनि समातिएका थिए । जे होस ‘साना माछा’ मात्र समातेको वात लागेको अख्तियारले ठूला ह्वेलमाछालाई पनि जालमा पार्न सफल भएको छ । हुन त जनमानसमा अख्तियार पनि चोखो छैन भन्ने सुनिन्छ ।
जसरी एउटा काठलाई धमिराले धुजाधुजा बनाउँछ । त्यसैगरी यि भ्रष्टहरुले देशलाई त्यसैगरी धुजाधुजा बनाइरहेका छन् । राजनिती थाल्दा ‘सिलटिम्बुर’हरु समेत अहिले आफ्नो शरिरनै भारी हुने गरि मोटाएका छन् । भुँडीभित्र गैरकानुनी भुक्तानी,फर्जी बिल, ब्यक्तिगत खर्च, नक्कली हवाई टिकट लगायतको जालो फिजिएको छ । २४ लाख भन्दा बढिको सोमरसको ड्रमनै पेटमा पुगेपछि अरु त के के पुग्छ । गनिसाध्यै छैन ।
बोर्डका उच्च अधिकारीनै कमाउतन्त्रमा लागेपछि उनीभन्दा कनिष्ठहरु त उनकै पथमा लम्कनेनै भए । पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठले पनि आफ्ना हाकिमले पच्छाएको ‘मनी–मन्त्र’ जपको सहि पालना गरेकै हुन । भ्रष्टाचार अभियोग लागेकामा अवकाशप्राप्त पर्यटन सचिव शुसिल घिमिरे,बनमन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेल र कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल पनि अख्तियारको फन्दामा परे ।
एउटा कुरा अचम्म छ । आखिर सरकारी कर्मचारीलाई कस्तो खालको तालिम दिइन्छ ? सरकारी सेवा प्रवेश गरेको केहि बर्षभित्रमै गगनचुम्बी भवन, सुविधासम्पन्न गाडी, कसरी हुन्छ ? हुनत भ्रष्टाचार गर्न तम्सिएकाहरु जसरी पनि जे गरेर भएपनि कमाइ त गर्छन नै ।
मलाई त यस्तो लाग्छ अख्तियारले सबैभन्दा पहिले सबै बहालवाला मन्त्री देखि लिएर सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भुँडीको नापो लिनुपर्छ । आखिर राज त भुँडीमै छ । भुँडीमा जे पनि अटने रैछ । नागरिकले खाइनखाई तिरेको राजश्व पनि कर्मचारीकै भुँडीमा, गगनचुम्बी भवनपनि भुँडीमै, नक्कली बिल पनि भुँडीमै, महिनै पिच्छेको तलब पनि भुँडीमै, भत्ता पनि भुँडीमै जानथालेपछि भुँडीको राज त पत्ता लगाउनै पर्‍यो ।
एउटै संस्थामा त करोडौँ भ्रष्टाचार हुन्छ भने देशभरी छरिएर रहेका कार्यालयहरुमा कति भ्रष्टाचार होला ? देश र जनताको राजश्वमा गद्धारी गर्नेहरुलाई त्यतिकै छोडियो भने न त देश बन्छ न त जनता बन्छन । कर्मचारीको मात्र जयले हाम्रो देश कहिले सिंगापुर र अमेरिका जस्तै बन्नु ।